पेट छाम्दा डल्लो परेको जस्तो महशुस हुन्छ ? नसोच्नुहोस् सामान्य, हुनसक्छ गम्भिर - Samachar Post Dainik
पेट छाम्दा डल्लो परेको जस्तो महशुस हुन्छ ? नसोच्नुहोस् सामान्य, हुनसक्छ गम्भिर
काठमाडौँ । पेटको कुनै पनि भागमा दुखाईका साथ देखिने डल्लो के हो ? यो माथि छुँदा नरम र भित्र निकै गम्भिर हुनसक्छ।धेरै जसो मामिलामा पेटमा डल्लो हर्नियाका कारण बन्ने गर्छ। पेटमा हर्निया तब हुन्छ जब पेटको मलद्वारको संरचना पेटको भित्ताको मांसपेशीमा कमजोरीका कारण धक्का दिन्छ।
सामान्यतया यसलाई सर्जरीका माध्यमबाट ठिक पार्न सकिन्छ।दुर्लभ मामिलामा शरीरको डल्लो हेमेटोमा वा एक लिपोमा पनि हुनसक्छ। यहाँसम्मकी दुर्लभ मामिलामा यो क्यान्सर वा ट्युमरको लक्षण पनि हुनसक्छ। यदी तपाईलाई पेटमा डल्लो देखिनुका साथै ज्वरो, वान्ता वा पीडा मध्ये कुनै लक्षण देखिए भने त्यसलाई वेवास्ता गर्न हुँदैन्।
पेटमा डल्लो हुनुको लक्षण
प्रायः यस्तो किसिमको डल्लो आउने कारण हर्निया मानिने गरिन्छ। हर्नियाका विभिन्न प्रकार हुने गर्छन्। जसमध्ये प्रत्येकमा अलग अलग लक्षण हुने गर्छन्।यसका मुख्य लक्षणमा खोकी लाग्ने, झुक्दा पीडा हुनु, डल्लो आएको ठाउँमा दुख्नु, भारीपन, कमजोरी, छातिमा पीडा, खाना निल्न समस्या आदी पर्छन्।
पेटमा डल्लो आउनुका मुख्य कारण
इंग्वाइनल हर्निया तब हुन्छ जब पेटको भित्तामा कमजोरी हुने गर्छ। आन्द्राको एक भाग यसैको माध्यमबाट अन्य नरम भागमा फैलिन्छ। तपाई आफ्नो कम्मरको आसपास तल्लो पेटमा एक डल्लो देख्न सक्नुहुनेछ। वा महशुस गर्न सक्नुहुनेछ।
यो इंग्याइनल हर्नियासँग मिल्दोजुल्दो हुने गर्छ। नाभिको चारैतिर एक नाभि हर्निया हुने गर्छ। शिशुमा यस प्रकारको हर्निया सबैभन्दा धेरै हुने गर्छ। सामान्यतः यो आफै गाएब हुने गर्छ।
यो हर्निया जब हुन्छ, तब एक पूर्व सर्जिकल चिराले पेटको भित्तालाई कमजोर बनाउने गर्छ। जसका कारण पेटको केही भाग माथि आउने गर्छ। जटिलताबाट बच्नका लागि यसको सर्जरी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
हेमटोमा त्वचाको तल्लो एक रक्त संग्रह छ, जो भाचिएको रक्त प्रवाहको परिणामस्वरुप हुने गर्छ। हेमटोमा समान्यतः चोटपटकका कारण हुने गर्छ।
लिपोमा त्यहाँको डल्लो हो जहाँ त्वचाको तल एकीकृत भएर बस्छ। यो एक रबर जसरी फुलिएको महशुस हुने गर्छ। यसलाई धक्का दिदा केही हल्लिएको महशुस हुने गर्छ।
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:४८